Toerana hiantsoana ny antso | Martech Zone
Alatsinainy, Septambra 30, 2013 Alatsinainy, Septambra 30, 2013 Douglas Karr
Izahay dia mizaha toetra ny antso hatrany amin'ny tranonkala sy ny mpanjifanay ihany. Ity dia mety ho lahatsoratra fanabeazana fototra, saingy misy toerana maromaro hanomezana lalana mankany amin'ny fidirana an-tsehatra amin'ny tranonkala mahazatra. Ampirisihiko ny orinasa handrindra ireo toerana ireo amin'ny lohahevitra fitantanana ny atiny mba hahamora ny fanampiana ireo orinasa, ny fanavaozana ary ny fitsapana ireo antso-to-hetsika samihafa. Toerana CTA ho an'ny tranonkalanao:
Toerana malalaka - ny fananana toerana tsy miovaova avy amin'ny pejy mankany amin'ny pejy ahafahan'ny mpampiasa manantena ny mahita antso ho amin'ny hetsika dia zava-dehibe. Izy io dia mety ho tontonana manerana ny pejy, tontonana mihetsika / miakatra (mitovy amin'ny tontonana famandrihana), na popover div. Zahao hoe Piano ao anaty flash ary hahita takelaka ambonin'ilay footer manerana ny tranokala ianao Misoratra anarana anio.
mifanila - ny olona dia mamaky pejy amin'ny lamina F miankavia sy miankavanana. Ny CTA sidebar dia fomba tsara hisamborana ny fahitan'ny olona rehefa mamaky mifanaraka amin'ny atiny pejy izy ireo. Bonus isa raha azonao atao ny mitazona ny antso ho amin'ny hetsika mifandraika amin'ny atiny tena izy. Apetrakay eo amin'ny sisin-tranonay ny CTA ary navoaka izy ireo arakaraka ny sokajy navoaka ny lahatsoratra.
Ao amin'ny Stream - somary manelingelina kokoa io, fa ny fametrahana antso hanao hetsika ao anatin'ny atiny, na amin'ny alàlan'ny rohy, bokotra na CTA, dia azo antoka fa hita izany. Ny ankamaroan'ny rafi-pitantanana atiny dia hamela anao hanivana ny atiny, mba hahafahanao manampy antso hanao hetsika marika andalana vitsivitsy ao na alohan'ny / aorian'ny atiny pejy.
Aza hadino ny mamaky bebe kokoa momba mahatakatra ny F-Layout ao amin'ny Webdesigntuts +:
Nahita valiny mahatalanjona izahay teo amin'ny tontonana fisoratana anarana nidina Martech Zone. izany manao 400% tsara kokoa noho ny fiantsoana hanao famandrihana an-tsena any am-pototry ny lahatsoratray. Azoko antoka fa misy fiovana vitsivitsy azontsika sedraina hanatsarana ny valiny, saingy ny angon-drakitra voalohany manome tahirin-kevitra fa arakaraka ny maha-manelingelina antsika no mahomby kokoa ny valiny. Miankina amin'ny fanoherana an'io fanao io izahay satria tsy te ho very ny mpanatrika satria manaparitaka dokambarotra hatraiza hatraiza… saingy tsara ny manonona izany.
Tags: miantso amin'ny asamiantso ny toerana hanaovana hetsikactafanarahana masof layoutamin'ny antso an-tariby hanao hetsikadoka an-tseraserafiantsoana hetsika amin'ny sehatra rehetra
10 Okt 2013 amin'ny 8:29 PM
plugin iza no nampiasanao hahazoana ilay bara optin eo an-tampon'ny bilaogy?
Oct 15, 2013 amin'ny 9: 33 AM